Ny Process: Private Label
ny vokatra fantina
mifidy ny vokatra noho ny tsipika skincare mety ho dingana mahery vaika, fa ny manam-pahalalana varotra miara-miasa aminy expertly nampiofanina mba hitari-dalana anareo amin'ny dingana mora. Izy ireo dia ampianarina mba hangataka ny fanontaniana tsara, mamela anareo hanao ny vokatra effortlessly voafantina sy expertly; raha minia fihaonana ny zavatra ilain'ireo ny clientele.You dia hamerina ny tsipika manontolo ny efa mandroso amin'ny rijan, mifidy ny vokatra sy ny santionany nandidy izay ilaina ny mamantatra ny vokatra alohan'ny fifidianana. Ary, misy na oviana na oviana ny anjara-raharaha ny amin'ny vokatra midinika.
Maka ny fonosana
Raha vao voafantina ny vokatra efa nofidiko, ny kaonty mpanatanteraka hitari-dalana anao amin'ny alalan'ny safidy fonosana. raha mety ho asa goavana, isika, dia ho mora ho anao izany. Taorian'ny fanontaniana manan-danja vitsivitsy momba ny fahitana sy ny teti-bola, ny varotra mpiara-miasa dia hanampy anao hifidy ny vokatra isan-karazany ny fonosana safidy mba hamoronana mampivondrona, on-marika fijery.
Fanorenana ny Brand Identity
izao fa ny marika manokana skincare vokatra no voafantina sy ny fonosana nofidiko ianao, dia hifindra ho amin'ny miresaka ny marika. Zava-dehibe fa takatrao hoe iza ianao nivarotra ny, ary koa iza ianao toy ny orinasa, mba mamorona tandremo mba manakoako aminao sy ny mpanjifa.
Nanaovany ny fonosana
Rehefa ny marika efa tafatoetra tsara sy ny vokatra sy ny fonosana voafidy, dia hifindra ho amin'ny fampianarana ny fonosana. Ao amin'ny YunYang Cosmetic, izany dia mihoatra lavitra noho ny fanampiana preexisting famantarana ny marika, dia ny famolavolana izany dingana mba handika ny marika teo amin'ny skincare vokatra.
Ny endrika mamaritra ekipa dia dika iray ny marika ho anao ny elektronika hijery indray sy hanome hevitra. Ny dingana famoronana streamlined dia sady mahomby sy mahomby, antoka anareo ny nanova ny fiainako ny fotoana haingana indrindra azo atao.
Marketing & Selling ny Product
Ny fanohanana dia tsy mifarana fotsiny satria efa nandray ny marika manokana vaovao skincare tsipika. Ny ekipa matihanina nahita fianarana dia hanohy hanome anao ny fanazavana sy tari-dalana amim-pahombiazana ianao dia mila hivarotra sy hivarotra ny vokatra. Avy amin'ny aterineto ingredient banky angona, ho an'ny on-mpiasa matihanina skincare isika, dia hanome anao ny fanazavana tokony hoe mahomby na tafita eo amin'ny skincare tsena.
Raha mila fanazavana fanampiny momba Private Label sy ny fomba afahana manomboka, andefaso olona antsika sy ny kaonty vaovao solontenan'ny Ho faly hanampy anao.
YunYang Cosmetic foana hanome anao ny efa mandroso, kilasy ara-pitsaboana tsy miankina skincare vokatra ho an'ny marika. Rehefa mihoatra ny 15 taona tao amin'ny orinasa skincare matihanina, ny vokatra efa nivoatra avy tamin'ny taona fikarohana, fanaovana fitiliana sy ny feedback.
Nandritra ireo roapolo taona farany, dia efa nanatsoaka hevitra fa ny manan-danja indrindra ampahany amin'ny dingana marika manokana no antoka fa fantatray ianao, ny marika, ary ny tanjona - ankapobeny, ny fahitana. Izany no mahatonga ny manam-pahaizana tena voaofana fivarotana miasa aminao mba hitari-dalana anareo amin'ny dingana Label manokana; Fanontaniana mety tsara mba hanampy hanamboarana ilay tsipika vokatra tonga lafatra ho an'ny clientele.
Ao amin'ny YunYang Cosmetic, ny fifantohantsika eo amin'ny fahombiazana ny skincare tsipika, ary manolo-tena ho fatratra ny fanantenanao dingana rehetra ao an-dalana.
Quick Product miverin-dalana Times
Skincare manam-pahalalana ny manam-pahaizana
In-trano Graphic Designer Team
Professional fonosana fangatahana
endrika Mask , Whitening Serum, Face Mask Sheet , Matcha Mud Mask , Sheet Mask , endrika Mask Sheet ,